Xuska 1-da luulyo oo siyaalo kala duwan Soomaalida Iswiidhan ugu dabaal dagtay | Somaliska
Ka soo biloow xeebaha galbeed ee dalka oo ay ku taallo caasimaddii labaad ee Göteborg ugana sii dhaa dhac xagga koonfureed iyo magaalladda Malmö oo ay dabeeylaha iyo roobka caanka ku tahay, uga sii bax dhanka bari iyo tuuladda yar ee Eskilstuna la yiraahdo ee dhacda duleedka caasimadda Iswiidhan ee Stockholm.
Waxaa dhammaan magaalooyinkaasi soomaalidu degan ka dhaaceen xaflado iyo damaashaadyo siyaalo kala duwan oo quruxsan loogu dabaal dageyo xuska 1 luulyo oo ah markii ay Soomaaliya ka xorroowday gumeeystihii reer Yurub ee duulaanka ku soo qaaday una kala qeybiyey dadkeedii 5ta gobol sida xiddigta cad ee dhexda kaga taala calankeenna tilmaamayo.
Magaaladda Göteborg ayaa urruradda ciyaaraha waxeey qabteen koob iyo ciyaaro kubada cagta ah oo socday afar cish luguna maamuusay maalmaha xorriyadda ee 26 juun iyo 1 luuly,. Ciyaarahan ayaa waxaa ay ka socdeen garoonadda Brevida Arena iyo Eketrä, halkaaso oo ay mlaamihi ugu dambeeyey ay ka socdeen ciyaaro loo soo daawasho tagay aadna u xiiso badneyd.
Magaaladda Malmö, ayaa iyadana waxaa lugu soo bandhigay barnaamijyo lugu weeynayo maalinta 1 julay, iyadoo magaaladaasi marti u ahaayeen faniinta Xuseen Shire Ciyaar Jecel, Amina Dhool iyo Laki Xaaji Waceys, halkaana ku soo bandhigeen barnaamijyo qiimo leh iyo heeso wadani ah oo ka tarjumaya dhaqan ka tarjumaya maalinta ku qaaliga ah quluubta shacabka soomaaliyeed ee 1-da luulyo.
Xaflad taas la mid ah oo lugu weeynayo ayaa iyadana waxaa lugu qabtay degmadda Eskilstuna ee ku taalada duleedka caasimadda Stockholm, halkaas oo fannaanka caanka ah ee ee Cali Bashiir Cabdi Dhaanto ka dhigay wacdarro iyo suugaan wadani ah oo maalinta 1 luulyo lugu xusay.
Cali Dhaanto oo maalinta 1 luulyo kala qeyb galay soomaalida Eskilstuna ee Iswiidhan. foto: Anders Nilsson.
Kowda bisha sanadkii 1060-kii waxeey aheyd markii goboladda Koonfureed ay iska tuureen heeryadii gumeystihii foosha xumaa ee Talyaaniga, islamarkaasina isku darsameen labbadda gobol ee Waqooyi iyo Koonfur ee ka soo haray shantii gobol ee Soomaaliweyn ee gumeeystihu kala qeeybiyey, maalintaana loogu waq-lalay magaca Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Haddaba bahda Somaliska.com oo fursadan ka faa’iideeysaneeysa ayaa hambalyo iyo salaan hawada u marineeysa ummadda soomaaliyeed, maadama 1 luulyo tahay maalin ku qaali ah qalbiyadeenna. Waxaan sanado badan oo socda haddii Alla idmo u rajeyneynaa farxad, nabad iyo Soomaaliya oo ka baxda marxalada adag ee ay maanta ku jirto soona celiyo magacii iyo sharqaftii ay saxaadda caalamka ku laheyd.
Wasiirka isdhexgalka oo booqasho ku tagay Katrineholm [Video]